Na ọnụ ya: Hazie ebe nchekwa USB | Site na Linux
Na ọnụ ya: Hazie ebe nchekwa USB
Mgbe anyị enweghị ihe osise eserese dị ka GParted ma ọ bụ nhọrọ ịhazi ncheta dị ka ọ dị Gnome, anyị nwere ike iji iwu nke na-eme otu ihe ahụ dịka ngwaọrụ abụọ ahụ a kpọtụrụ aha n'elu.
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ijide n'aka na anyị arụnyela ngwugwu ahụ ndozi.
Ozugbo arụnyere, anyị ga-elele ebe nchekwa nchekwa anyị dị. Anyị nwere ike iji iwu ahụ:
Nke ga-eweghachi ihe dịka nke a:
Uzo nke masịrị anyị bụ nke na-ekwu, sị:
Ozugbo anyị matara nke bụ ngwaọrụ iji hazie, anyị na-eji iwu ahụ:
Na nhọrọ -F 32 anyị na-agwa gị na a ga-ahazi ya ka Abụba 32, na nhọrọ -n Anyị na-etinye akara ma ọ bụ aha na ngwaọrụ ahụ.
Mfe ziri ezi?
Dezie: Echefuru m ikwu na iji rụọ ọrụ a, a ga-agbasasị ngwaọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Na ọnụ ya: Hazie ebe nchekwa USB
mmm a na m eme ya n'uzo ozo:
-n ka m kpoo aha ma obu kpọọ ngwaọrụ USB.
-v ọ ga-egosi nke ngwaọrụ bụ otu na-ted.
Have ga na-agba ya n’enweghị ruturu na nne na nna m chere
Achọtara m na netwọkụ njikọ a site na ebe ị ga - enweta ngwugwu ụgwọ iji wụnye, m gbalịrị ya ma ọ na - arụ ọrụ nke ọma.
Echere m na ọ baara gị uru.
N'ihi na anyị nọ na Cuba, anyị enweghị ike ịnweta saịtị Google ma ọ bụ code.google ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, ọ bụrụ na ịnwere ike ibudata ihe dị nro ma zigara ya kzkggaara@myopera.com 😀
KZKG ^ Gaara, enyi, ajụjụ, kedu ka m ga-esi nyegharịa ngwaọrụ n'enweghị usoro? Na-ele anya na eriri iwu ma echere m nke ahụ.
You nwara tor?.?
Ezigala m ya site na Gmail, mee ka m mara ma ọ bụrụ na ịnataghị ya iji zipu ya site na mail ọzọ.
Yep ya biarutere m, m ji ajuju za gi 😉
Daalụ n'ezie enyi 😀
Akwụkwọ anyị nwere ike ịnweta ebe a dị ezigbo mma ...
Daalụ maka ikwu CubaRed. Obi uto inwe gi ebe a.
Daalụ maka ikwu ma nabata saịtị ahụ 😉
Ana m agba ọsọ site na Slax Linux (Live CD n'ezie: P) wee jiri iwu na-esonụ:
/ dev = ugwu elu
/ sda = ụgbọala ma ọ bụ mgbasa ozi nwere ike iwepụ
Jini, i zoputara ndu m.
Ogbodo 7 dijo
Ọtụtụ afọ gafere, m na-elele post xD.
Ezigbo tuto elav.
Ọfọn, ọ dịghị ihe, ọ nweghị ụzọ, ọ bụghị site na iji obi ụtọ ma ọ bụ nkasi obi site na nhọrọ gị: ọ na-aza m:
mkfs.vfat: enweghị ike imeghe / dev / sdg1: Ọgụ naanị faịlụ sistemụ
Ndewo nzuzu dijo
Have ga-enwerịrị ngwugwu dosfstools arụnyere, iji nwee ike ịhazi na ọnụ, dị ka a ga - asị na ị nọ na ọnọdụ Gnome ị nwere ike iji ọrụ diski, ọ dị mfe.
Zaghachi HOLA LOCO
USB mbụ dijo
Echere m na ọ dị ntakịrị karịa mgbagwoju anya, ya na onye nkuzi ọ dịla mfe.
Zaghachi na Original USB
Daalụ, mgbe m nyochachara n'ọtụtụ ebe, enwere m ike iji ozi a rụzie ya, m tinye iwu sudo mkfs.vfat -F 32 -n My_Memory / dev / sdx wee meghee obi m wee dezie ya fat32, ma ugbu a ọ na - arụ ọrụ nke ukwuu, ihe niile bụ ifu-ọfụma mere site na iji mkpịsị odee were igwe eji ebu igwe na-ebi akwụkwọ. Enwere m olileanya na anaghị m emehie ihe ahụ ọzọ.
Ekele, ezigbo blog.
Enyi Elav na ndị ọrụ Linux,
Daalụ ! Ọ dị afọ 2 kemgbe ị dere ihe a na saịtị ọ bụla ha na-ekwu ihe dị iche, ọtụtụ anaghị arụ ọrụ, ezighi ezi ma ọ bụ usoro na-efu. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na azịza ziri ezi dị ka nke a apụta ebe ụfọdụ ka ị ghara ịla nzuzu na-anwale ihe ndị anaghị arụ ọrụ. M na-ahụ nke a blog. Cheers
Ogbogu 22 dijo
Eziokwu bụ na emere m usoro ndị ahụ gosipụtara nke taa, taa, eweghachiri m 16GB pendrive… ekele nke ọma, ihe ọmụma gị dị oke oge… 🙂
Nwanna ahuru m gi n'anya. Ekele diri gi nke oma
René Izarra Izarra dijo
mkpa iji "-I" nke mere na ị nwere ike overwrite na eriri nkebi.
Zaghachi René Izarra Izarra
Achọtara m nhọrọ ọzọ akọwapụtara nke ọma http://wp.me/p2mNJ6-3I
Zaghachi zoro ezo
Ihe nkuzi a zọpụtara m n’ụzọ dị mkpa !!!
Mmadu ma otu esi eme usable bible with a Linux iso image of more than 4 Gb since for Fat 32 onyonyo a agaghịzị omume, mmadụ nwere ike iduzi m etu esi akwadebe eriri, ekele na ekele
lelee unetbootin ma ọ bụ clonezilla
Zaghachi ka ferreyrawm
Ndewo, lee, enwere m USB nke m na - enweghị ike ịhazi, ebe ọ bụ naanị ikike edere, agbalịrịla m ya na enweghị ihe ọ bụla, m ga - akwado ụfọdụ sọftụwia, ebe nchekwa ahụ amata ya, enwere m ike ịhụ ihe dị na ebe nchekwa ahụ, Enwere m ike idetuo site na ebe nchekwa na pc, mana ọbụghị site na pc gaa na ebe nchekwa ebe ọ bụ na m matara na ebe a na-agụ agụ bụ naanị, biko. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọmụma, nye m aka. nwee obi ụtọ ...
Enwekwara m otu nsogbu ahụ, o doro anya na ụfọdụ malware na kọmpụta ọzọ gbanwere ebe nchekwa ka ọ gụọ naanị na ọdịnaya enweghị ike ihichapụ ma ọ bụ ọbụna hazie ya, ọbụnadị na Linux, ọ bụghị na windo, agbasoro m ọtụtụ nkuzi na iwu njikwa nke ekwesịrị idozi ya na ọ nweghị , enweghị ihe ọ bụla nwere ike ime na ncheta, ọ dị onye ọ bụla maara ka esi weghachite ojiji nke eriri USB na nsogbu a?
nkwanye ugwu dijo
Oge ụfọdụ nke a emeela m. Ọ rụụrụ m ọrụ, na gparted, iji nhọrọ "mebie" (ọ bụghị naanị ihichapụ ya) nkebi wee mepụta okpokoro ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ, m ga-ewepụ ma jikọtakwa ebe nchekwa ahụ ka m nwee ike mepụta tebụl ọhụrụ ahụ.
Zaghachi nye honlondono
Nsogbu bụ na a formats na b W95 FAT32 ma m ochie windo XP ọ dịghị agụ pendrives, m nwere Ọkpụkpọ ha n'ụzọ ọzọ na format c W95 FAT32 (LBA)
Zaghachi ka ochoo
O nweghi otu n’ime ntuziaka ndị a nyeere m aka, amaghị m ebe nsogbu dị.
ekele, ana m akpọtụrụ ya mgbe niile
Ndewo. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka ịhazi igwe ahụ biko
Ikwesiri wepu eriri USB na iwu umount iji nwee ike ịhazi
Ndewo Enwere m USB nke sistemụ anaghị amata, m na-ezitere gị ozi ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka inwe ekele
[83384.348839] USB 1-1: ọhụrụ nnukwu ọsọ USB ngwaọrụ nọmba 8 iji ehci-pci
[83384.506219] eriri 1-1: Achọpụtara ngwaọrụ USB ọhụrụ, idVendor = 0c76, idProduct = 0005, bcdDevice = 1.00
[83384.506225] eriri 1-1: Ngwunye USB ọhụrụ: Mfr = 1, Ngwaahịa = 2, SerialNumber = 0
[83384.506228] eriri 1-1: Ngwaahịa: USB Mass Nchekwa
[83384.506231] eriri 1-1: Emeputa: General
[83384.506848] usb-nchekwa 1-1: 1.0: Achọpụtara ngwaọrụ Nchekwa USB
[83384.508235] scsi usu5: usb-nchekwa 1-1: 1.0
[83385.524951] scsi 5: 0: 0: 0: Direct-Access GENERIC USB Mass Storage 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[83385.556757] sd 5: 0: 0: 0: Gbakwunyere scsi ọnyà sg3 ụdị 0
[83385.561706] sd 5: 0: 0: 0: [sdc] Etinye SCSI disk ewepu
mgbọrọgwụ @ localhost: ~ # fdisk -l
Diski / dev / sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 ndi
Units: ndị 1 * 512 = 512 octets
Nkeji mpaghara (ezi uche / anụ ahụ): 512 bytes / 4096 bytes
I / O nke kachasị (nke kacha / kacha): 4096 bytes / 4096 bytes
Disdị Disklabel: gpt
Ngwaọrụ Malite End Sectors Size Type
/ dev / sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI Sistemụ
/ dev / sda2 1050624 49879039 48828416 23.3G Linux faịlụ sistemụ
/ dev / sda3 49879040 69410815 19531776 9.3G Linux faịlụ sistemụ
/ dev / sda4 69410816 76107775 6696960 3.2G Linux gbanwere
/ dev / sda5 76107776 80013311 3905536 1.9G Linux faịlụ sistemụ
/ dev / sda6 80013312 1465147391 1385134080 660.5G Linux faịlụ sistemụ
mgbọrọgwụ @ localhost: ~ # fdisk -l / dev / sdc
fdisk: enweghị ike imeghe / dev / sdc: Ọ dịghị ọkara hụrụ
mgbọrọgwụ @ localhost: ~ # hdparm / dev / sdc
SG_IO: ihe nzuzu / efu efu, sb : f0 00 02 00 00 00
multcount = 0 (gbanyụọ)
readonly = 0 (gbanyụọ)
readahead = 256 (na)
mgbọrọgwụ @ localhost: ~ # hdparm -C / dev / sdc
steeti ụgbọala bụ: nọrọ na njikere
mgbọrọgwụ @ localhost: ~ # hdparm -I / dev / sdc
Ngwa ATA, ya na mgbasa ozi na-enweghị ewepu
O nwere ike ịbụ na ejiri ya: 1
Ezi uche dị max ugbu a
sịlịnda 0 0
isi 0 0
ndi / track 0 0
Ebumnuche / Ahụike Nha: 512 bytes
nha ngwaọrụ ya na M = 1024 * 1024: 0 MBytes
nha ngwaọrụ ya na M = 1000 * 1000: 0 MBytes
dị n'ime oghere / ebe nchekwa = amaghi
IRI agaghị adị
Enweghị ike ịme okwu IO abụọ
R / W otutu mpaghara nyefe: akwadoghi ya
DMA: anaghị akwado
Zaghachi na sergio.59
SimpleRetro, tinye vintage na retro utịp na foto gị n'ịntanetị.